Samee Qiimo Bilaash Ah - Fyrebox
U Sameyso Su'aalo kuu gaar ah Websaydhka ama Blog
Abuur kedis si aad u abuurto tilmaamo, aad wax ku baratid ama si fudud ugu hawlgasho dhagaystayaashaada.
Dalxiis tagSamee Qiimo Bilaash Ah
Hal Kedis, Laba Foom
Waad salaaman tihiin ganacsatada!
Abuurista kedis waxay ka caawin kartaa ganacsigaaga
Samee kediskaaga si aad u abuurto khariidado. Haddii hogaamintaadu tahay meherad meherad ama ganacsi macaamiisha, weydiintu waa hab fiican oo lagu abuuro hagitaan websaydhkaaga, bogga degitaanka ama warbaahinta bulshada.
Waxaad ugu diri kartaa xogta aruurinta su'aalahaaga si toos ah 300 codsiyood oo badan.
Tilmaamaha ay ka soo baxaan su'aalahaaga ayaa si toos ah u gala wareegga iibkaaga oo bilaabaya abuurista dakhli.
Macallimiin waad salaaman tihiin!
Xogta ay soo aruurisay kediskaaga ayaa ah halka laga bilaabayo
Kediska ayaa ardayda wax bari kara. Min dugsiga hoose ilaa jaamacadda, su'aalaha waxay ka dhigaan waxbarashada mid firfircoon oo xiiso leh. Waxaad kaloo tijaabin kartaa aqoonta ardaydaada oo aad uheli kartaa natiijooyinkooda waqtiga dhabta ah.
Su'aalahaagu waxay si otomaatig ah u diiwaangeliyaan ciyaartoyga su'aalahaaga iyo jawaabahooda.
Waad dooran kartaa inaad hesho warbixin ciyaartoy kasta ama aad dhoofiso dhammaantood
Warbixinnada, waxaad fursad u leedahay inaad hesho jawaabaha ciyaartoydu, waqtiga ay ku bixiyeen su'aalahaaga iyo dhibcahooda.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan sameynta kedis
Kediska waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sahan isdhaafsi. Waad waydiin kartaa su’aal kasta oo aad marin u heli kartaa tirakoobka waqtiga dhabta ah
Waad heli kartaa tirakoobka jawaabtaada waqtiga dhabta ah.
Istaatistikada lagu qorey su'aashaada waxay ku siineysaa natiijada baaritaanka suuqaada waqtiga dhabta ah si aad u bilawdid inaad ficil sameyso.
SIDII AAD UGU HESHIIDI KARO wax bilaash ah